How To Order | Kar Kar Gyi
Type of Process Order
1.After choosing the item, click add to cart.
၁.မိမိလိုအပ်သောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ပစ္စည်းအောက်ဘက်ရှိ Add To Cart Buttomအားနှိပ်ပါ။
2.If you finished shopping, click "Go to Checkout".(or)If you want to buy something, click "Continue Shopping"
၂.၀ယ်ယူမှုအဆုံးသတ်လိုပါက Checkout Buttomကိုနှိပ်၍လည်းကောင်း၊နောက်ထပ်အခြားသော ပစ္စည်းများကိုထပ်မံ ၀ယ်ယူလိုပါက Continue Shoppingကိုနှိပ်ပြီးဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
3.You need to insert the product quantity and then click "Update Button". And then click "Checkout" button. You will arrive to login page.(If you don't have an account, you need to register the account. If you have account, no need to create account login with username andpassword.)
၃.လိုအပ်သောပစ္စည်းအရေအတွက်ဖြည့်ပြီး Update Buttomအားနှိပ်ပါ။၎င်းနောက် Checkout Buttomကိုနှိပ်ပါ။Login Pageထဲသို့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။(အကယ်၍Accountမရှိပါကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Account Registerလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကောင့်ဖွင့်ပြီးသူများထပ်ဖွင့်ရန်မလို Username နှင့် Password ဖြည့်ပြီးဝင်ရန်)
4.To create new account, click “Create new account”. Fill “Username” and “email(currently used)” and click “Create an account”. And then “Account detail for yourname at karkargyi” mail will arrived to your mail. You need to click the “link”.And then you will arrive the website, click “login” button. And then fill the account password and confirm password as the same.And then you need to choose time zone “Asia/yangon:day,month,year” , click “Save”.
၄.အကောင့်သစ်ဖွင့်ရန် “Create new account” ကိုနှိပ်ပါ။ Username နှင့် Email (လတ်တလောအသုံးပြုနေသော mail) ဖြည့်ပြီး “Create an account” ကိုနှိပ်ပါ။ မိမိဖြည့်ထားသော email account ထဲသို့ “Account detail for Yourname at karkargyi” mail ရောက်ရှိလာပါမည်။ထို mail ထဲမှ “link” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “login” button ကိုနှိပ်ပါ။ မိမိ account password နှင့် confirm password တူအောင်ဖြည့်ပါ။ ထို့နောက် time zone တွင် “Asia/yangon: day , month, year ” ကိုရွေးပြီး “Save” ကိုနှိပ်ပါ။
5.After create an account , click “shopping cart item”. And then you will arrive in checkout page. Check the order product and quantity , click “Checkout” button.
၅.အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက် shopping cart item လေးကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် checkout page လေးထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါမယ်။ မိမိရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းအမည်၊အရည်အတွက်ကိုစစ်ဆေးပြီး “Checkout” button ကိုနှိပ်ပါ။
6.Please fill correctly in billing information form and click “Continue to next step” button. (Please fill postal code
၆.Billing information form တွင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီး “Continue to next step” button ကိုနှိပ်ပါ။(postal code ဖြည့်ရန် <ဥပမာ - City နေရာတွင် Yangon နှင့် postal code နေရာတွင် 1111 ဖြည့်ပေးပါ။>
7.Check again User and billing information and click “Continue to next step” button.
၇.User And Billing Information များကိုတဖန်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး “Continue to next step” button ကိုနှိပ်ပါ။
8.Your order processing is completely finished. Our Staff will contact you with mail(or)viber for your order products stock, products prices and payments. If you want to ask anything, you can contact with phone/viber 095170098.
၈.လူကြီးမင်း၏ Orderပေးပို့မှုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီ။Order၌ပါဝင်သောပစ္စည်းများ၏ ကုန်လက်ကျန်နှင့်တန်ဖိုးများအားလည်းကောင်း၊ငွေပေးချေမှုနှင့်ပါတ်သတ်သောအချက်အလက်များအားလည်းကောင်း လူကြီးမင်း၏ Email(သို့မဟုတ်)Viberသို့ များမကြာမှီအချိန်အတွင်းတွင် အရောင်းဌာနမှပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမည်ခင်ဗျာ။လိုအပ်သောမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအတွက် Phone/Viber-095170098 သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1.Add to Cart > 2.Login > 3.Fill address(billing form) > 4.Done
ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၁)သိန်းနှင့်အထက် ပို့ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း (မြို့နယ်ပေါင်း-17)ခုအတွက်
1kg – 3kg - 2000 ks
3kg – 5kg - 3000 ks
5kg – 7kg - 3800 ks
7kg – 10 kg - 4500 ks
10 kg ကျော်လျှင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
မြို့တွင်းပို့ဆောင်ချိန် (၁)ရက်မှ - (၃)ရက် ကြာမြင့်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းဖိုးကျသင့်ငွေ (၁)သိန်းအောက်ရှိ order မှာယူမှုများအတွက် -
ရုံးခန်းမှ ခေါက်တိုဂိတ်ချခ (2000ks) + သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်အလိုက် ပို့ခ(တန်ဆာခ) ၀ယ်ယူသူဘက်မှ ကျသင့်ပါသည်။
ပစ္စည်းဖိုးကျသင့်ငွေ (၁)သိန်းနှင့်အထက်ရှိ order မှာယူမှုများအတွက် -ရုံးခန်းမှ ခေါက်တိုဂိတ်ချခပေးရန်မလိုပါ + သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်အလို က်ပို့ခ(တန်ဆာခ)သာ ၀ယ်ယူသူဘက်မှ ကျသင့်ပါသည်။
နယ်သို့ပို့ဆောင်ကြာမြင့်ချိန်ကို သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။